Nepali Rajneeti | एमसिसीबारे भ्रम फैलाइयो, अमेरिकी सेना आउँछ रे! कसले आउन दिन्छ नेपालमा?: देउवा
बैसाख १७, २०७८ शुक्रबार २९९ पटक हेरिएको
बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइरालाका पालादेखि एमसिसीको प्रक्रिया अगाडि बढेको र आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पास मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै देउवाले एमसिसी ठूलो अनुदान भएको बताए।
एमसिसीबारे भ्रम फैलाइएकोमा उनले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
‘यो सित्तैमा दिएको अनुदान हो, ब्याज तिर्नु पनि पर्दैन। तर हरेक भ्रम फैलाइएको छ। अमेरिकी सेना आउँछ भनेर, कसले आउन दिन्छ नेपालमा अमेरिकी सेना?,’ देउवाले प्रश्न गरे, ‘अमेरिकी सेना आउन दिउँला त म आफैँले? यस्ता झुठा प्रचार गर्ने?’
एमसिसी पारित गर्ने सन्दर्भमा अहिले कुनै छलफल नभएको उनले बताए।
साथै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि एमसिसी पारित गर्न सहयोग गर्ने भनेको देउवा बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।
आज बुढानिलकण्ठमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देउवाले सरकारले असाध्यै कम पिसिआर गरे पनि ३७ प्रतिशतमा कोरोना देखिनुले संक्रमण व्यापक फैलिएको देखिने देउवाको भनाइ छ।
उनले सरकारले चरम लापरवाही देखाएको पनि आरोप लगाए।
‘यो सरकार विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दैन। कांग्रेसलगायत दलले दिएका सुझाव पनि मान्दैन,’ उनले भने, ‘उद्घाटन र भिडभाड तथा तडकभडकमा सरकार लागेपछि निषेधाज्ञाको अवस्थामा पुगेको हो।’